Disposable kwakavharwa nenyama earloop ...
Iyo mbichana zvinhu zvekurasa kurasa kumeso kumeso zvinopihwa neyechinyakare zvigadzirwa zvekurapa zvigadzirwa 'mafekitori, ayo anogadzira izvo zvekurapa zvekushandisa kwenguva refu, uye hunhu hunovimbiswa. Uye zvakare, inoenderana chikamu chezvinhu chinosangana neyakajairwa EN14683 qualification manejimendi sisitimu. Kunyanya, iyo yepakati zvinhu inonyungudika yakaputirwa ne25 gramu pasikweya mita uye iyo BFE (Bacterial Filtration kunyatsoshanda) iri 99% pamusoro, iyo inopihwa neSinopec, inonzi yakanyanya kusungunuka kuridzwa ini ...
Kambani yedu yakatengesa michina yekugadzira yehunyanzvi uye tekinoroji yepamusoro yekugadzira iyo yakasununguka nzeve chiuno bhendi. Iyo huru mbishi zvinhu ndeye chinlon uye spandex. Tinogona kupa akawanda-mavara nzeve loop bhendi. Iyi nzeve chiuno bhendi chena ruvara, uye upamhi i3mm kutenderera. Iyo inokodzera kuraswa yakatsemuka mhando yekurapa kana yekuvhiya kumeso kumeso. Kazhinji, iyo nzeve chiuno bhendi kumeso kumeso, simba rayo iri 17 N. Tine mabhegi kana rolls package Kutumira kunogona kuitwa nendege expression nekukurumidza. Zve ...
Chinangwa uye rondedzero yehutachiona sampling kit 1. Inoshandiswa kuunganidzwa uye kutakurwa kwechipatara furuwenza, avian furuwenza (yakadai seH7N9), ruoko-rutsoka-muromo hutachiona, gwirikwiti uye mamwe ma virus ehutachiona pamwe ne mycoplasma, ureaplasma uye chlamydia specimens 2. Hutachiona nemimwe mienzaniso inoenderana inochengetwa uye kutakurwa mukati memaawa makumi mana nemasere mufiriji (2-8 degrees). 3.Virusi uye dzakabatana masampuli akachengetwa pa -80 madhigirii kana mune emvura nitrogen kwenguva yakareba. Special Cherechedzo: A) Kana iyo colle ...
Tinogona kupa muchero wakajeka wakarongedzwa gummy pipi, uye zvakare, iyo yakagadziriswa pipi inogamuchirwa. Isu tiri vekutanga vagadziri vane yavo fekitori, inopa yakachipa pashiri fekitori mutengo uye hwakanakisa mhando. Iyo gummy pipi yakakosha mbishi zvinhu ndeye carrageenan, maltose manyuchi, xylitol, yakasarudzika muchero upfu, uye zvimwe zvekuwedzera chikafu. Tinogona kupa bere chimiro modhi, mamwe maumbirwo emhando akagadzirwa, uye akagadzirwa kwemazuva makumi maviri. Parizvino, iwo mavara eicherry tsvuku, ndimu yero, girini yeapuro, bhuruu uye pepuru ari ...